Ubuntu 14.04 ကို Install လုပ်ပြီးသည့်နောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း Linux မှ
Ubuntu 14.04 ကို Install ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
Ubuntu 14.04 Trusty Tahr ရက်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့အလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒီရေပန်းစားတဲ့ distro တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်သလိုဒီမှာအချို့ရှိသည် မင်းလုပ်သင့်တဲ့အရာ တစ် ဦး လုပ်ပြီးနောက် တပ်ဆင် ခြစ်ရာကနေ
2 ၂။ စပိန်ဘာသာစကားသွင်းပါ
3 ၃။ codecs၊ Flash၊ အပိုစာလုံးများ၊ drivers များထည့်သွင်းပါ။
4 4. နောက်ထပ် repositories ကို Install လုပ်ပါ
5 Ubuntu ကို configure လုပ်ရန် help tools ကို Install လုပ်ပါ
6 6. ချုံ့ applications များ Install လုပ်ပါ
7 7. အခြားအထုပ်နှင့် configuration မန်နေဂျာ Install လုပ်ပါ
8 Application များကို Ubuntu Software Center တွင်ရှာပါ
10 10. အညွှန်းကိန်းများနှင့် Quicklists Install လုပ်ပါ
11 ၁၁။ Compiz & plugins Configuration Manager ကို Install လုပ်ပါ
12 ၁၂။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီနူးကိုဖယ်ရှားပါ
13 ၁၃။ Dash မှ "စီးပွားဖြစ်" ရှာဖွေမှုများကိုဖယ်ရှားပါ
14 ၁၄။ ဝဘ်ကိုသင်၏ desktop နှင့်ပေါင်းစည်းပါ
15 15. Ubuntu Desktop လမ်းညွှန်
Ubuntu 14.04 ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် Canonical မှဖြန့်ဝေသော ISO ပုံသဏ္withာန်နှင့်ပါသောမတူကွဲပြားသော package အသစ်များပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, installation ပြီးပါကအမြဲတမ်း run ရန်အကြံပြုသည် Update Manager။ ၎င်းကို Dash မှရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ် terminal မှအောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
sudo apt update ကို sudo apt အဆင့်မြှင့်
Dash မှာငါရေးခဲ့တယ် ဘာသာစကားပံ့ပိုးမှု ပြီးတော့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာစကားကိုထည့်နိုင်လိမ့်မည်။
LibreOffice / OpenOffice အတွက်စပိန်စကားလုံး
1. သွားပါ LibreOffice တိုးချဲ့စင်တာ
2. ရှာပါ စပိန်အဘိဓါန္
3. သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအဘိဓာန်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ (အထွေထွေသို့မဟုတ်သင့်တိုင်းပြည်နှင့်သက်ဆိုင်သည်)
ဤအရာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် OXT ဖိုင်ရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မရှိပါက၊ သင် download လုပ်ထားသောဖိုင်၏ extension ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
4. LibreOffice ကိုဖွင့်ပါ၊ ရွေးချယ်ပါ Tools> Extensions များ ကိုနှိပ်ပါ ပေါင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောဖိုင်တည်ရှိရာလမ်းညွှန်သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းသည်။
LibreOffice / OpenOffice တွင်စပိန်စာလုံးပေါင်းခြင်းနှင့်သဒ္ဒါစစ်ဆေးခြင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြထားသောလမ်းညွှန်အပြည့်အစုံကိုကြည့်ရန်ဤအဟောင်းကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ဆောင်းပါး။ ငါတို့သည်လည်းတစ် ဦး ပြင်ဆင်ကြပြီ လမ်းညွှန် Firefox / Chromium တွင်စပိန်စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးသူကိုထည့်သွင်းရန်။
၃။ codecs၊ Flash၊ အပိုစာလုံးများ၊ drivers များထည့်သွင်းပါ။
တရားဝင်ပြissuesနာများကြောင့် Ubuntu သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်မဆို MP3၊ WMV သို့မဟုတ် encrypted DVD များဖွင့်ရန်၊ အခြားအရင်းအမြစ်များ (၀ င်းဒိုးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော) အပိုဆောင်းရင်းမြစ်များ၊ ပိုင်ရှင်များ (3D လုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ် Wi-Fi ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုရန်) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Ubuntu installer သည်ဤအရာအားလုံးကိုခြစ်ရာကနေ install လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Installer ဖန်သားပြင်များထဲမှတစ်ခုကိုရွေးရုံသာလိုသည်။
အကယ်၍ သင်မပြုလုပ်သေးလျှင်၊ ၎င်းတို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းတပ်ဆင်နိုင်သည် -
Ubuntu သည် 3D driver ရရှိနိုင်မှုကိုအလိုအလျောက်သိရှိပြီးသတိပေးသင့်သည်။ အဲဒီလိုဆိုရင်၊ အပေါ်ကဘုတ်မှာဗွီဒီယိုကဒ်ပြားတခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ထိုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ် နှိပ်၍ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ၎င်းမှစီးပွားဖြစ်ယာဉ်မောင်းများကိုလည်းတပ်ဆင်နိုင်သည် Dash> အပိုဆောင်းယာဉ်မောင်း။
စီးပွားဖြစ် codec များနှင့်ပုံစံများ
အကယ်၍ သင်သည် MP3၊ M4A နှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်ပုံစံများကိုမနားထောင်ဘဲအသက်ရှင်။ မရနိုင်သောသူများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပါက MP4, WMV နှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်ပုံစံများဖြင့်သင်၏ဗွီဒီယိုများကိုမဖွင့်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဤရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောကမ္ဘာတွင်ရှင်သန်နိုင်ခြင်းမရှိလျှင်အလွန်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းနည်းရှိသည်။ အောက်ပါခလုတ်ကိုသာနှိပ်ပါ။
အပိုကန့်သတ် repositories ကို install လုပ်ပါ
သို့မဟုတ် terminal တစ်ခုထဲကိုရေးပါ
sudo ubuntu-ကန့်သတ်-extras apt install
စာဝှက်ထားတဲ့ DVDs ("မူရင်း" အားလုံး) အတွက်အထောက်အပံ့ထပ်ထည့်ဖို့၊ ငါ terminal တခုကိုဖွင့်ပြီး၊
sudo apt ကိုထည့်သွင်းပါ။ libdvdread4 sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
4. နောက်ထပ် repositories ကို Install လုပ်ပါ
GetDeb (ယခင် Ubuntu ကလစ်နှိပ်ပြီးဖွင့်သည်) သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး Deb packages များနှင့်ပုံမှန် Ubuntu repositories တွင်မပါရှိသောလက်ရှိဗားရှင်းများကိုထုတ်လုပ်ပြီးအဆုံးအသုံးပြုသူအားရရှိနိုင်စေသည်။
GetDeb ကို install လုပ်ပါ
Ubuntu အတွက်ဂိမ်းသိုလှောင်ရေး Playdeb ကို getdeb.net ကိုပေးသူများမှဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Ubuntu အသုံးပြုသူများအားနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းများနှင့်တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများသိုသိုသိပ်သိပ်ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။
PlayDeb ကို Install ပါ
Ubuntu ကို configure လုပ်ရန် help tools ကို Install လုပ်ပါ
Ubuntu Tweak ပါ
Ubuntu ကို configure လုပ်ရန်လူကြိုက်အများဆုံး tool မှာ Ubuntu Tweak ဖြစ်သည် (မကြာသေးမီရက်များအတွင်းက၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်အနည်းဆုံး၎င်း၏ဖန်တီးသူဘက်မှရပ်တန့်သွားနိုင်သည်ဟုထင်ရသည်) ဤအံ့ you ခြင်းကသင်၏ Ubuntu ကိုညှိရန်နှင့်သင်ကြိုက်သည့်အတိုင်းထားခဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Ubuntu Tweak ကို install လုပ်ဖို့အတွက်ငါ terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီး
UnSettings သည် Ubuntu ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အတွက်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တူညီသောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်သော MyUnity, Gnome Tweak Tool နှင့် Ubuntu-Tweak ကဲ့သို့သောအခြားအစီအစဉ်များလည်းရှိသော်လည်း၎င်းတွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများပါဝင်သည်။
sudo add-apt-repository ppa: diesch / စမ်းသပ်ခြင်း sudo apt update sudo apt install unsettings
6. ချုံ့ applications များ Install လုပ်ပါ
လူကြိုက်များသောအခမဲ့နှင့်စီးပွားဖြစ်ပုံစံအချို့ကိုချုံ့။ decompress နိုင်ရန်အတွက်၊ အောက်ပါ package များကိုသင် install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
sudo apt install un rar rar unace p7zip-full p7zip-rar sharutils mpack lha arj
7. အခြားအထုပ်နှင့် configuration မန်နေဂျာ Install လုပ်ပါ
Synaptic - GTK + နှင့် APT ကို အခြေခံ၍ အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဂရပ်ဖစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Synaptic သည် program package များကိုစွယ်စုံ သုံး၍ install လုပ်ရန်၊ update လုပ်ရန်သို့မဟုတ် uninstall လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း - ရှာဖွေရေးဆော့ဗ်ဝဲစင်တာ - Synaptic ။ မဟုတ်ရင် Terminal မှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
sudo Synaptic apt install
တတ်လွယ်ခြင်း - Terminal မှ application များကို install လုပ်ရန်အမိန့်ပေးသည်
၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် "apt" command ကိုအမြဲတမ်းသုံးနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း - Search Software Center: aptitude ။ မဟုတ်ရင် Terminal မှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
sudo apt ကို install aptitude
gdebi - .deb packages များတပ်ဆင်ခြင်း
.deb ကိုနှစ်ချက် နှိပ်၍ တပ်ဆင်ခြင်းသည် Software Center ကိုဖွင့်သောကြောင့်၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ လွမ်းဆွတ်သည်
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း - ဆော့ဝဲစင်တာကိုရှာဖွေပါ - gdebi ။ မဟုတ်ရင် Terminal မှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
sudo gdebi apt install
Dconf အယ်ဒီတာ - Gnome ကိုပြင်ဆင်သောအခါ၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်။
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း - Search Software Center: dconf editor ။ မဟုတ်ရင် Terminal မှာအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။
sudo apt dconf-tools ကို install လုပ်ပါ
အဲဒါကို run ဖို့ငါ Dash ကိုဖွင့်ပြီး "dconf editor" လို့ရိုက်ခဲ့တယ်။
Application များကို Ubuntu Software Center တွင်ရှာပါ
Ubuntu တွင်အလိုအလျောက်ပါသော application များကိုသင်မနှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်သော application များကိုမတွေ့ပါက Ubuntu Software Center သို့သွားနိုင်သည်။
အဲ့ဒီကနေသင်ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ applications များထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသောရွေးခြယ်မှုအချို့မှာ -
ခရိုမီယမ်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ (Google Chrome ၏အခမဲ့ဗားရှင်း)
GIMP, ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ (Photoshop အမျိုးအစား)
အစဉ်အလာ GNOME interface ကိုရန်
အကယ်၍ သင်သည် Unity ကိုနှစ်သက်သည်မဟုတ်ပါကအစဉ်အလာ GNOME interface ကိုအသုံးပြုလိုပါကအောက်ပါတို့ကိုလုပ်ပါ။
မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေရှိ session menu ကိုရှာပါ
Ubuntu ကနေ GNOME Flashback ကိုပြောင်းလိုက်ပါ
ဤ option မရရှိလျှင်အောက်ပါ command ကိုအရင် run ပါ။
sudo apt gnome-session-flashback ကို install လုပ်ပါ
Unity အစား GNOME Shell ကိုသုံးကြည့်ပါ။
တပ်ဆင်ခြင်း - terminal ထဲမှအောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
sudo apt gnome-shell ကိုထည့်ပါ
ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗားရှင်းများပါ ၀ င်မည့် GNOME Shell PPA မှလည်း၎င်းကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
sudo add-apt-repository ppa: ricotz / စမ်းသပ်ခြင်း sudo add-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3 sudo add-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3-stage tweak-tool ကို gnome-shell-extensions တွေကို
သတိပြုရန် - ဤနည်းအားဖြင့် GNOME Shell ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် Ubuntu ယောက်ျားများစွန့်ခွာသွားသောအခြား GNOME packages များဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ Nautilus ။ သေချာတာပေါ့၊ သင်လိုချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာပြproblemနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့မင်းဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသတိထားဖို့လိုတယ်။
Cinammon သည် Gnome3၏ fork တစ်ခုဖြစ်သည်။ Linux Mint ကိုဖန်တီးသူများကအသုံးပြုပြီးတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မူလ Menu ကို အသုံးပြု၍ နိမ့်သော task bar ကိုခွင့်ပြုသည်။
sudo add-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / cinnamon-stable sudo apt update sudo apt ထည့်သွင်းသစ်ကြံပိုးသည်
MATE သည် Fnk Gnome2၏အငြင်းပွားဖွယ် Shell ကိုအသုံးပြုစဉ်က desktop desktop အားအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် GNOME အသုံးပြုသူများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့် MATE ဆိုတာ GNOME2ပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ packets အချို့ရဲ့နာမည်တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်။
sudo add-apt-repository "deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu $ (lsb_release -sc) အဓိက" sudo add-apt-repository "deb http://repo.mate-desktop.org / ubuntu $ (lsb_release -sc) ပင်မ "sudo apt update ကို sudo apt ထည့်သွင်းပါ။ mate-archive-keyring" sudo apt ထည့်သွင်းပါ။ mate-core mate-desktop-environment ကိုထည့်ပါ။
10. အညွှန်းကိန်းများနှင့် Quicklists Install လုပ်ပါ
အညွှန်းကိန်း - သင် desktop ၏အပေါ်ဆုံး panel တွင်ပေါ်လာမည့်အညွှန်းများစွာကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤအညွှန်းကိန်းများသည်ရာသီဥတု၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအာရုံခံကိရိယာများ၊ ssh၊ စနစ်မော်နီတာများ၊
ညွှန်ပြချက်များ၏စာရင်းအပြည့်အစုံနှင့်၎င်းတို့၏တပ်ဆင်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ကိုရရှိနိုင်ပါသည် Ubuntu ကိုမေးပါ.
အမြန်စာရင်း - Quicklists သည်သင့်အားအသုံးချပရိုဂရမ်များ၏ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ desktop ပေါ်ရှိဘယ်ဘက်တွင်တွေ့ရသောဘားကို ဖြတ်၍ ပြေးသည်။
Ubuntu မှာပုံမှန်အားဖြင့်များစွာသော install လုပ်ပြီးသားပါ။ သို့သော်စိတ်ကြိုက်အမြန်စာရင်းအချို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ စာရင်းအပြည့်အစုံနှင့်၎င်း၏တပ်ဆင်ခြင်းအကျဉ်းဖော်ပြချက်နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် Ubuntu ကိုမေးပါ.
၁၁။ Compiz & plugins Configuration Manager ကို Install လုပ်ပါ
Compiz ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောစရာမလိုတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့စာရေးကိရိယာတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့သူပဲ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် Ubuntu သည် Compiz ကို configure လုပ်ရန် graphical interface မရှိပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ထည့်သွင်းထားသောပလပ်အင်အားလုံးနှင့်မပါပါ။
၎င်းတို့ကိုတပ်ဆင်ရန် terminal ကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်လိုက်သည်။
sudo apt compizconfig-settings-manager compiz-plugins-extra ထည့်သွင်းပါ
သင်၏ desktop ၏ထိပ် panel တွင် applications menu ပေါ်လာစေသည့် "global menu" ဟုခေါ်သောဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်သည် terminal ကိုရိုးရှင်းစွာဖွင့်ပြီး၊
sudo apt appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt ကိုဖယ်ရှားပါ
Log out လုပ်ပြီးပြန်ဝင်ပါ။
အပြောင်းအလဲများကိုပြန်လည်လက်ခံရန် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး
sudo apt appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt ကိုသွင်းပါ
ခေါင်းစဉ်ဘားတွင် window menu များ
အသုံးမပြုရသေးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များမတိုင်မီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီနူးတွင်လည်းတွေ့ရသည်။ သို့သော်ယခုပြတင်းပေါက်ရှိမီနူးများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘားတန်းတွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် Dash ကိုဖွင့်ပြီး "Appearance" ကိုရိုက်ပါ၊ "Behavior" tab သို့သွားပြီး "title window menus ခေါင်းစဉ်ဘားတွင်" ကိုရွေးပါ။
၁၃။ Dash မှ "စီးပွားဖြစ်" ရှာဖွေမှုများကိုဖယ်ရှားပါ
အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါ dashboard ကိုဖွင့်လိုက်တယ် စနစ်ချိန်ညှိချက်များ> လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေး> ရှာဖွေခြင်း။ ထိုနေရာတွင်ရှိပါက "Include online results" ကိုရွေးပါ။
Dash တွင်ပေါ်လာသော "စီးပွားဖြစ်" ရှာဖွေမှုများကိုသာပိတ်ရန်သင်သွားနိုင်သည် Application မ်ား> Filter Results> Type> Extensions များ။ ပလပ်အင်ကို နှိပ်၍ ရွေးပါ ပိတ်ထားသည်.
"စီးပွားဖြစ်" ရှာဖွေမှုအားလုံးကို (Amazon, Ebay, Music Store၊ Popular Tracks Online, Skimlinks, Ubuntu One Music Search & Ubuntu Shop) အားလုံးသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်ခုအောက်တွင်သင်သည် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
gsettings တွင် com.canonical.Unity.Lenses မသန်မစွမ်းသောသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ .scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' more_suggestions-skimlinks.scope '] "
၁၄။ ဝဘ်ကိုသင်၏ desktop နှင့်ပေါင်းစည်းပါ
စတင်ရန်ငါဒိုင်ခွက်ကိုသုံးခဲ့သည် စနစ်ချိန်ညှိချက်များ> အွန်လိုင်းအကောင့်များ။ ထိုတွင်ရှိ“ Add Account” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပံ့ပိုးထားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင် Aol၊ Windows Live, Twitter, Google, Yahoo!, Facebook (နှင့် Facebook Chat), Flickr နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ဤအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသော application များသည် Empathy, Gwibber နှင့် Shotwell ဖြစ်သည်။
Ubuntu WebApps သည် Gmail၊ Grooveshark, Last.fm, Facebook, Google Docs နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်သော Unity desktop နှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစည်းနိုင်ရန် Unity desktop နှင့်လွယ်လွယ်ကူကူပေါင်းစည်းနိုင်သည်။ သင် HUD မှတစ်ဆင့်ရှာဖွေနိုင်သည်၊ desktop သတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်၊ သူကပင်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်သတိပေးချက်များ menu ကိုအတူပေါင်းစည်းပါလိမ့်မယ်။
စတင်ရန်ထောက်ပံ့ထားသောဆိုဒ်များကိုသာကြည့်ပါ (စာရင်းအပြည့်အစုံရှိသည်။ ) ဒီမှာ) အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ် "install" pop-up ကိုနှိပ်ပါ။
15. Ubuntu Desktop လမ်းညွှန်
Ubuntu အတွက်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကို (စပိန်ဘာသာဖြင့်) ကြည့်ခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ။ ၎င်းသည်အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအထောက်အကူဖြစ်ပြီးအလွန်ပြည့်စုံသောဖြစ်ခြင်းအပြင်၎င်းကိုအသုံးပြုသူများကိုစိတ်ထဲရေးထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်ပြီးဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
Ubuntu တွင်အသစ်အဆန်းများနှင့် application များစတင်ရန် launcher ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ဆိုသည့်အချက်အလက်များ (Unity ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးသူများအတွက်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်)၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဖိုင်များ၊ တေးဂီတနှင့် Dash နှင့်ပိုမိုသောအရာများကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်၊ application bar နှင့် menu bar ရှိရာ၊ session ကိုမည်ကဲ့သို့ပိတ်မည်၊ အသုံးပြုသူများကိုမည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲမည်၊
Ubuntu 14.04 desktop လမ်းညွှန်ကိုသွားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Ubuntu 14.04 ကို Install ပြီးတဲ့နောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
140 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Intel Pentium 3.00 Ghz နှင့် 2Gb Ram ပါသောကွန်ပျူတာရှိသည်။ Ubuntu 14.04 LTS ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာလား။ Kubuntu သို့မဟုတ် Xubuntu ကော။
ကောင်းတယ် သင်အသုံးပြုသော Pentium သည် dual-core ဖြစ်ပါက Ubuntu နှင့် Kubuntu တို့ကိုအသုံးပြုရန်သင့်မှာအခက်အခဲမရှိပါ။ ၎င်းသည် single-core ဖြစ်ပါက၊ ငါ Xubuntu ကိုပိုကောင်းပါတယ် ရွှင်လန်း!
ထင်တာပဲ။ အလားတူစွာ၊ သင်က၎င်းရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်သင်၏ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးကိုကောင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မလားဆိုတာကို pendrive တစ်ခုမှသင်စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
Hug, Pablo ။
ဒီတစ်ခါလည်းအနည်းငယ်နှေးကွေး bro ရွှေ့
Carlos Sierra ဟုသူကပြောသည်
အမှန်တရားကအရမ်းမြန်တယ်၊ နှေးနေရင် Ubuntu ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ချင်ရင် XUBUNTU ထက်စက်ဟောင်းတွေမှာ LUBUNTU ပိုမြန်လိမ့်မယ်။
ကားလို့စ် Sierra ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ Ubuntu 14.04 ကနေ Lubuntu 14.04 ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကပိုကောင်းတယ်။ ဒီ 2gbs နှစ်ခုဟာ4လိုပဲ။
Carlos M ကိုပြန်ပြောပါ
ပထမစာပိုဒ်တွင် Ubuntu 14.04 Saucy Salamander ကိုသင်ကိုးကားသည်။ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကူးယူခြင်းနှင့်ကူးထည့်ခြင်းဖြင့်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည် ။။ ပို့စ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော်သူသည်အခြား…နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းမိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သည်
ဟယ်လို! သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအပိုဒ်လွဲချော်ငါပြီးသားကတညျ့။ 🙂
ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်ယခင်လမ်းညွှန်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည် (၎င်းတွင်အပြောင်းအလဲများရှိသော်လည်း) Ubuntu သည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဘာသာစကားပြောင်းခြင်းသည်မူကွဲတစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားပါသလား။
သိပ်မများပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုပြောနေတာတွေအကြောင်းအထူးသဖြင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုထည့်သွင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်၊ အခုဒီဗားရှင်းမှာဂရပ်ဖစ်ရွေးစရာကအဲဒါကိုပြောင်းလဲပစ်တဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။ အတူတူ che တန်ဖိုးထားသည်!
အဆိုပါ ppa ppa: makson96 / fglrx သည် Ubuntu 14.04 ကိုမထောက်ပံ့ပါ
အတိအကျ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြproblemနာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တွင် ၁၃.၄၀ နှင့်အတူ hd3000 ati နှင့် ၁၃.၀၀ ရှိသည့်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသော PC ရှိပြီး၎င်း ppa ၏ပံ့ပိုးမှုကြောင့် ၁၃.၁၀ သို့မတင်ပို့ပါ။ 13.04 သို့ပြန်သွားရန်ဟုတ်လား?
Juan Carlos Senar ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Ati hd3450 သည်ကျွန်ုပ်ထံမှကမ်းလှမ်းသော flgrx ယာဉ်မောင်းများနှင့်လုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါ အပိုဆောင်းယာဉ်မောင်း Mint 13 (Ubuntu 12.04) ၌။ ငါပြန်လာမယ်။
Juan Carlos Senar သို့ပြန်သွားပါ
အဲ့တာမှန်တယ်။ ငါအောက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ငါပဲလမ်းညွှန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို update ။
ကောင်းသောနံနက်အချိန်တွင်လက်ရှိ ubuntu tweak ppa သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုမပံ့ပိုးနိုင်ဘဲ၊ terminal မှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီနူးကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်မကောင်းသောအကြံအစည်မဟုတ်သောကြောင့်လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ - ပုံ - အမူအကျင့်အားပိတ်ထားနိုင်သည်။ မင်္ဂလာပါ
ယခုတွင်ရနိုင်သည် http://www.ubuntu-tweak.com ဗားရှင်း 0.8.7 သီအိုရီအရ Ubuntu 14.04 နှင့်လိုက်ဖက်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ .deb package ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် terminal တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ပြareနာရှိနေသောအမှားအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် $ sudo apt-get install -f –fix- missing.
အဲ့တာမှန်တယ်! ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါလမ်းညွှန်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတညျ့ပါပြီ ယခုအချိန်တွင်အကြံပြုထားသည့်နည်းလမ်းမှာ Dash မှရယူနိုင်သောအပိုဆောင်း Drivers လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ Alvaro! အဲဒါမမှန်ဘူး။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီနူးကိုထိုနေရာမှပိတ်ထားလို့မရပါ။ ပို့စ်တွင်ရှင်းလင်းထားသည့်အတိုင်း၎င်းကိုအမြင့်ဆုံးမဟုတ်သော ၀ င်းဒိုးများအတွက်သာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒါဟာသေးငယ်တဲ့ခြားနားချက်, ဒါပေမယ့်အဆုံး၌တစ် ဦး ခြားနားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Xubuntu 14.04 ကိုရက်အနည်းငယ်ကြာစမ်းသပ်နေပြီး၊ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးသတင်းများမရသေးပါကအံ့သြမိပါသည်။ terminal မှလုပ်ပါ sudo apt-get update && sudo apt-get update ကို အသစ်တစ်ခုကိုမပစ်ပါဘူး ရရှိနိုင်ပါက packages များရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြခြင်းမရှိဘဲ, ကာလပြီးဆုံးပြီ အမှားမပေးဘဲ အဲဒါကျွန်တော့်အတွက်သာမန်ပုံမပေါက်ပါဘူး
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပရင်တာသည်ကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်သောအခါသူ့ဟာသူအလိုအလျောက် configure မရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရမည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်စွာဤနည်းဖြင့်တပ်ဆင်သော်လည်း Xubuntu 12.04 မှခြေလှမ်းတစ်ခုအလားပုံရသည်။
ခဏအကြာငါ install လုပ်ပြီးသည်နှင့် updates (အနည်းငယ်) ထွက်လာလျှင်သူတို့ apt-get dist-upgrade command ဖြင့်ထွက်လာသည်။ ငါသည်လည်း aptitude ကိုထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Debian motherboard တွင်ရှိသကဲ့သို့၎င်းသည် aptitude search နှင့် package များကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးအုပ်စုတစ်ခုလုံးကို uninstall လုပ်နိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ Juan Carlos၊ ခင်ဗျားပရင်တာကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။ ငါ drivers တွေကို install လုပ်တယ်။ ပုံနှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါပရင်တာကို configure လုပ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ အရင်ဗားရှင်းမှာတော့ပြproblemsနာမရှိဘူး။ မည်သည့်ဖိုရမ်တွင်မှအဖြေမရနိုင်ပါ။
ဟလို Ana - မင်းမှာဘာပရင်တာရှိသလဲ။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ Xubuntu 12.04 မှာ Epson sx125 ပရင်တာကိုချိတ်ဆက်မိသောအခါအလိုအလျောက် configure လုပ်ပြီး Epson website မှ .deb package များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးနောက် Scanner (multi-function) ကို configure လုပ်ရသည်။
Xubuntu 14.04 တွင်ပလပ်ဂင်တပ်ဆင်သည့်အခါပရင်တာသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
1.- သွားပါ မီနူး> ဆက်တင်များ> ပစ္စည်းကိရိယာ> ပရင်တာများ။ အဘယ်သူမျှမပေါ်လာနဲ့ကျွန်မအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပရင်တာထည့်ပါ။ ဒီကနေရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးသင်ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ရမှာပဲ ပြီးရင်ဆက်လုပ်ပါ။ အဆုံးအထိ။
၂။ အသုံးပြုပါ ခွက် လိပ်စာရိုက်ထည့် browser ကိုမှ http://localhost:631/ ဤနေရာတွင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
အကယ်၍ သင်၏ပရင်တာသည် HP ဖြစ်ပါကသင်ပြောသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကောင်းစွာပြုပြင်ထားပြီးပုံမမှန်ဘဲဖြစ်နိုင်သည် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်တတ်သည်) ။ ကျွန်ုပ်၏ဖြေရှင်းချက်မှာ hplip-gui package ကို install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။$ sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ။ hplip-gui) ပြီးတော့ run ပါ $ sudo hp-setup ကို ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ အချိန်အများစုကထွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
မင်းကအာဂျင်တီးနားဖြစ်တယ်ဆိုတာငါနားလည်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့စကားပြောပုံနဲ့ရေးသားပုံကိုခွဲခြားရမယ်။ sos = မင်းကလိုချင်ချင်ချင်ချင်လိုချင်တယ်၊
ဟတ်၊ သူလည်းရေးထားတာကိုလည်းအာရုံစိုက်မိတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင်၊ သူကအာဂျင်တီးနားပဲ၊ ငါအာဂျင်တီးနားပါ။ ဘာကြောင့်သူကငါတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာငါနားမလည်ဘူးလား။ ဟုတ်တာပေါ့၊ သင်ပြောပုံနှင့်သင်ရေးသားပုံတို့အကြားကွဲပြားခြားနားမှုရှိပေမယ့်သင်မှတ်သားထားသည့်အရာများမဟုတ်ပေမယ့်“ အရေးအသား” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့လည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ငါပြောတာကအာဂျင်တီးနားတွေဟာအဲဒီ“ စကားများ” နဲ့လည်းငါရေးတယ် » (သို့မဟုတ်သူတို့ခေါ်ကြသည်သမျှ) ။ ဒါပေမယ့်ရန်ကီးတောင်မှဂရိတ်ဗြိတိန်၊ ပီရူး၊ မက္ကဆီကိုတို့အတွက်သူတို့ရဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုပါစို့။
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုငါအရမ်းသဘောကျပေမယ့်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုရေးထားတဲ့ post ကိုကြည့်ရတာသင်ထူးဆန်းနေတယ်။ La Nación (သို့) အာဂျင်တီးနားရှိမည်သည့်သတင်းစာတွင်မဆိုဤကဲ့သို့သောစာမျိုးကိုရေးသားကြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ စပိန်ဘလော့ဂါများမှထိန်းသိမ်းထားသောဘလော့ဂ်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်“ localisms” ကိုလေးစားသကဲ့သို့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏ဒေသအလိုက်ရေးသားခြင်းကိုကျွန်ုပ်ခံစားရပါသည်။ သူတို့ကိုငါရေးရန်ဖိတ်ကြားသည်။ သူတို့သည်သူတို့၏စာအရေးအသားကို ပြောင်းလဲ၍ "ကြားနေ" စပိန်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်သင့်အား link တစ်ခုပေးသည်။ http://www.muylinux.com/?s=ois
Che, သင်ဘာမှနားမလည်ဘူးလို့ထင်ရတယ်။ အခြားအာဂျင်တီးနားကိုရှာဖို့ငါ့အာရုံကိုဖမ်းလိုက်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Linux မှကျူးဘားမှလာသည်ဟုထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်တာပေါ့၊ မင်းကဒေသန္တရတွေနဲ့ရေးခဲ့တာကိုငါ ၀ မ်းသာတယ်။ ငါထင်မြင်ချက်ကိုအထက်တွင် "ဝေဖန်ခြင်း" ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်ငါ့ထင်မြင်ချက်များအားလုံးသည်အပျက်သဘောဆောင်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်မြင်ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်စွာအနေဖြင့် ... ((ကျွန်ုပ်မှားကောင်းပြီးဖြစ်မည်) သို့သော်မရရှိပါကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောစကားလုံးများကိုသင်မည်သို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။
ပြီးတော့နောက်မှတ်ချက်တခုမှာငါကြားနေတဲ့စပိန်စကားကိုပိုနှစ်သက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပြောတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခြားနေရာမှာထားတာပဲ။ ငါအချို့သောမက္ကဆီကန်ဒေသများကိုလွမ်းတယ် ... ကောင်းပြီ ... ဒါပေမယ့်ငါထပ်ခါတလဲလဲ, ဒီဘလော့ဂ်ထဲမှာအာဂျင်တီးနားမှာအရေးအသားကိုရှာဖွေရတာကောင်းတယ်။
ဤ blog သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်ဘာသာစကားအားလုံးတွင်ရေးသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်မှတ်ချက်ကမင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်ငါတောင်းပန်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကကျွန်မရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်သလိုအရင်ကူးယူထားတဲ့ကော်ပီပါ။ ဒါကကျွန်တော်ထင်ထားတာပါ၊ ဒါပေမယ့်အလုပ်အားလုံးကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်။
« you are »« want »သည်ဒေသခံများဖြစ်သော်လည်းကျွန်းဆွယ်တွင်ကျွန်ုပ်သည် neutral Spanish မှပိုင်ဆိုင်သော« are », « want / want »ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အဲဒီမှာ ...... ဒေသခံ ... ကြားနေစပိန် sep လူတိုင်းအတွက်သာယာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့မင်းကမင်း၊ မင်း၊ မင်းကိုသုံးပြီးအရေးအခင်းကဒေသအလိုက်မဟုတ်တာလား။ ကျေးဇူးပြု..
တော် ၀ င်စပိန်အကယ်ဒမီကငါရေးတဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောသလဲဆိုတာကိုဖတ်ခိုင်းပါမယ်။ ၎င်းကို voseo ဟုခေါ်ပြီးအာဂျင်တီးနားနှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသည်။ http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=iOTUSehtID6mVONyGX
၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုမရှိသောအရေးအသားနည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းသည် "စကားပြောနည်းတစ်မျိုး" လည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် RAE မှလက်ခံထားသောမိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အရင်ကငါပြောခဲ့သလိုပဲ - ငါသဘောတူတယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းကိုပြန်ဖတ်ခိုင်းပါရစေ။ ရဲဘော်ရဲဘက်ကမာရီယိုကသူတို့ဟာဒေသအလိုက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ဟာ "တရားဝင်" စပိန် / ကက်စတီလီယန်စကားပြောပြီး၊ မိုက်မဲစွာကျန်တဲ့သူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ယုံကြည်သူများစွာရှိပါတယ်။ ကြားနေစပိန်သည်အမှန်တကယ်မတည်ရှိသည့်ကြံ့၊ ဒဏ္likeာရီတစ်ခုနှင့်တူသည်။ သင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးရေးသားခြင်းကိုဤကျွမ်းကျင်သူများကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ စပိန်ဘာသာ၏မူကွဲအားလုံးသည်လုံးဝမှန်ကန်သည်၊ စပိန် - အာဂျင်တီးနားလည်းပါဝင်သည်၊ ဘလော့ဂ်နဲ့ဆက်သွားပါ လေးစားပါတယ်
ကံမကောင်းစွာပဲမင်းမှားတယ် ၎င်းသည် "ပြောနေသကဲ့သို့" စာအရေးအသားမဟုတ်သကဲ့သို့ပညာမတတ်သည့်အရေးအသားလည်းမဟုတ်ပါ။
ချစ်ခင်ရပါသော Saeron, (ပထမ ဦး စွာငါမက်ဒရစ်မှစင်ကြယ်သော strain, ကောင်းသော«ကြောင်»ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းလင်း။ )
ခင်ဗျားရဲ့ထင်မြင်ချက်ဟာကိုလိုနီနယ်ချဲ့နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ Panispanico အဘိဓါန်သံသယကိုထည့်ပြီးရှင်းလင်းပါ။
PS ။ ။ ငါ Buenos Aires မှာ ၂၈ နှစ်နေခဲ့ပြီး၊ ဒီအပိုင်းတွေဆီကနေသင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
ကောင်းပြီ Cinnamon ကိုဖန်တီးသူများက cinnamon desktop သည် fork မဟုတ်ဘဲသူ့ပတ်ဝန်းကျင် xD ဖြစ်သည်ကိုအာမခံသည်
အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဒါကြောင့်အမဲချိတ်လျှင် ... သို့မဟုတ်မ?
ubuntu 14.04 ကိုမကြာသေးခင်ကကျွန်တော် install လုပ်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံး (beta မဟုတ်) beta မဟုတ်ပဲဘာလို့လဲမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ၁၀.၁၀ Ubuntu ဟာအရမ်းကိုမြန်လာတာငါ unity သုံးတာ၊ windows hang နဲ့အရာအားလုံးကိုသုံးတာကြောင့်ဒီ version 10.10 ဟာပိုမြန်တယ်လို့လက်ခံတယ်ဒါပေမယ့် ငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါက ၁၃.14.04၊ ၁၃ နဲ့ ၁၃.၀၄ တွေလောက်တော့မချိန်းတွေ့ပါဘူး။ ငါမကြာသေးမီက fedora ကိုပြန်သွားပြီး XFCE Fedora မှာနေခဲ့တယ်
Ubuntu 14.04 ကိုသွင်းပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ။
Arch linux ကို format လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ
ဂျူအာ! သို့တိုင်ဤ Ubuntu ၏မူကွဲသည်လုံးဝမကောင်းပါ။ ၎င်းသည်ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်။
သို့မဟုတ်မူလ OS၊ တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ Linux ။
Hee hee hee ... ._ ။ အကယ်၍ Arch ကို install လုပ်မည်ဆိုပါက windows သို့ပြန်သွားပြီးဘဝ xD အတွက်သာနေလိုသည်
Rafael Mardojai ကိုပြန်ပြောပါ
ကောင်းပါတယ်လေးစားစွာဖြင့် Ubuntu ဗားရှင်းအသစ်သည် LibreOffice 4.1 နှင့်ပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဗားရှင်း ၃.၆ နှင့်ဗားရှင်း ၄.x မှတိုးတက်လာသောကြောင့်ယေဘူယျအဘိဓာန်များကိုအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
install လုပ်ရန်နှင့်အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် "apt-get" မရှိတော့ကြောင်းသတိရရန်ယခု "apt" command ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဥပမာ - "sudo apt remove Spanish-idiom" (hehe၊ ဒါကဟာသမဟုတ်ဘူး၊ စိတ်မဆိုးဘူး) ။
Ernesto Flores ဟုသူကပြောသည်
ဤနေရာတွင်ညွှန်ပြသည့်အတိုင်းအဆင့်မြှင့်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်မစတင်လိုသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဒီ distro နှင့်အခြားသူများအတွက် Audacity version (2.0.5) သည် LADSPA, LV2, DSSI နှင့်အခြား Linux ဇာတိပလပ်အင်များကိုလက်မခံပါ။ Software Administrators မှပလပ်အင်များအားစီမံခန့်ခွဲသည့်အခါ၎င်းသည်သာမန်အားဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့စီမံရမယ်ဆိုတာကျွန်မမသိပါဘူး။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသုံးဝင်သောမှတ်ချက်များကိုကြိုတင်အသိအမှတ်ပြုသည်။
ရိုးသားစွာ - Ernesto Flores
Ernesto Flores ကိုပြန်ကြားပါ
APT ကိုသက်တမ်းတိုးလိုက်ရုံနှင့် sudo apt-install install မဟုတ်တော့ဘဲ sudo apt ထည့်သွင်းလိုက်သည်။
Debian နှင့် Ubuntu တို့အတွက် APT ဗားရှင်းသစ်: http://rootsudo.wordpress.com/2014/04/20/nueva-version-de-apt-en-debian-y-ubuntu/
မင်္ဂလာပါ။ ဤအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ themes များမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့် Ubuntu ၏အသွင်အပြင်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ကိုယ့် 14.4 ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ noob ပေါ့
ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဗားရှင်းဟာတိကျတဲ့ဆက်ခံသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ xfce ဗားရှင်းကိုသာတိတိကျကျဆက်ခံထားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့စည်းလုံးညီညွတ်မှုဟာ XD fairground shotgun ထက်ပိုပြီးပျက်ကွက်လို့ပါ။ ငါတွေ့မြင်သောတစ်ခုတည်းသောအမှားမှာ awn သည် repositories တွင် (beta ကတည်းက) ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းမပြုပြင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ^ = ^ ။ ^ = သို့သော်ထိုတွင်ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ကိုထားခဲ့သည်ò.ò
ငါ xfce ကို၎င်း၏ပေါ့ပါးမှုနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်သာမကမြင့်မားသော configurability ကိုလည်းအထူးအကြံပြုလိုသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကကျွန်တော့်ကိုဘယ်တော့မှယုံကြည်မှုမပေးခဲ့ဘူး
P.S. သူမမှတ်ချက်ပေးရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပြင်ဆင်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဝင်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ကိုထုတ်ဝေရန်ကြိုးစားသောအခါကျွန်ုပ်သည် TT တွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သည်ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်ခန့်ကြာအောင်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကစပြီးသတ္တုမထုတ်သေးဘူးဆိုတာငါသိတယ်
ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အကောင့်နှင့်အတူမှတ်ချက်ပေးရန်ရိုက်ထည့်နိုင်, ငါအမှားငါ့ XD ... သို့မဟုတ်ငါ့အကောင့် OO သိမ်းယူခဲ့သည်ဆိုပါစို့
ကောင်းတယ် ငါပြtheနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ် 🙂
ဒီမှာ Saito ကိုတွေ့တာကောင်းတယ်။
Unsettings repository သည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ version 13.10 အတွက် ... ၎င်းသည်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။
ထိုနည်းတူသစ်ကြံပိုးလည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သိုလှောင်ရုံများသည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ထပ်ထည့်ပါ။
မည်သူမဆိုမှန်ကန်သောသူရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ အချက်အလက်များကိုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
dash ထဲရှိမည်သူမဆိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြproblemsနာရှိသလား။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို Wikipedia သို့မဟုတ် Deviantart ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအွန်လိုင်းမရရှိနိုင်ပါ။ အခြားအရာအားလုံး (ဗွီဒီယိုများ၊ ပုံများ၊ လူမှုရေး) များအလုပ်လုပ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ ဒီ Ubuntu ထွက်လာတဲ့သူများထက်ပိုကောင်းတယ်။ ငါပြောတာက LTS ပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါကတခြားသူတွေကိုမသိပေမယ့်ငါကအရာရာတိုင်းနဲ့ငါ့ကိုသိတယ်။ ငါ့ကိုပြmeနာဖြစ်စေတယ်၊ ​​အခု linux mint နဲ့ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရသည်။ ၎င်းသည် Ubuntu ကိုအခြေခံသည်ဟုမထင်ရသော်လည်းအထူးသဖြင့်ဤ Ubuntu LTS ဖြင့် Linux သို့သွားမည့်သူများအတွက်ဤသည်မှာကောင်းမွန်သောသင်ခန်းစာဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ အားလုံးကောင်းမွန်သွားပြီ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မရရှိနိုင်တာတစ်ခုကတော့ sopcast ကို install လုပ်ဖို့ပဲ။ ငါ repositories တွင်ကြည့်ရှုခဲ့သော်လည်းအမြဲတမ်းကျွန်ုပ်ကိုအမှားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဘယ်သူကငါ့ကိုကူညီနိုင်မှာလဲ
Ubuntu အဟောင်းကိုလည်းကျွန်တော် install လုပ်လို့မရဘူး။
sudo apt compizconfig-settings-manager ကို install compiz-fusion-plugins-extra
ကျွန်ုပ်ရရှိပါသည်။ compiz-fusion-plugins-extra package ကိုရှာ။ မရပါ
အထုပ်အမည်ပြောင်းခဲ့သည်တူသောပုံရသည်။ ဒါကိုကြိုးစားကြည့်ပါ -
sudo apt compizconfig-settings-manager compizplugins-extra ထည့်သွင်းပါ
98 ဇာက် ၉၈ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်ဤလမ်းညွှန်ပါအချက်အလက်များနှင့်အလွန်ကျေနပ်မိသည်။3GHZ ရှိ Intel Core i2.4 နှင့်ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့ပ်အားမည်သည့်ဗားရှင်းကအကြံပြုသနည်း။ အချို့သော OS X များမှအောင်မြင်မှုများကိုအခမဲ့သုံးစွဲပါစေ။ LINUX ကိုအသုံးပြုပါ
Isaac ဇာက် 98 သို့ပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ၊ ဒီ ubuntu ဘယ်လိုနေလဲ။ ကျွန်တော်အဲဒါကိုအကြံပေးပါသလား ငါ Arch နှင့်သူ၏အမှားများငြီးငွေ့ငါလွယ်ကူသောအရာတစ်ခုခု, အကူအညီလိုချင်!
linux-ubuntu ကိုသုံးပြီးသောသူများ၏ထင်မြင်ချက်ကိုသင်လက်ခံလျှင် !! မင်းရဲ့စက်ကိုအကောင်းဆုံးပေးတာ၊ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုယုံပါ၊ ငါပြတင်းပေါက်တွေနဲ့စိတ်ပျက်အားလျော့သွားရုံသာမကကျွန်ုပ်စက်ကိုပုံစံချရတိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်တော့်ကိုရူးသွပ်စေခဲ့တယ် အမှားအယွင်းများစစ်ဆေးခြင်းရှိသော်လည်း ၀ င်လာသည်။ (၁၅ ရက်တစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေသည်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ) ကျွန်ုပ်၏ပြသနာများမှာအင်တာနက်ပေါ်တွင်သာအသုံးပြုခြင်း၊ tabs ၁၀ ခုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ် tab များစွာနှင့်ပြတင်းပေါက် ၅ ခုသေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ၏အ pc အဘို့, ကအရာအားလုံးအေးခဲခြင်းနှင့်ပိတ်ပစ်သည်အထိ, အလွန်ဆိုးရွားလှတဲ့အပူ !! ကျွန်တော့် Lap ကမကြာသေးခင်ကပါ။ ၂ လလောက်လန်းလာပြီ၊ ပိုပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်မိပါတယ်၊ Ubuntu ကိုလမ်းပြတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ LIFE ဟာကျွန်တော့်ရင်ခွင်နဲ့အတူထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားပြီး Ububtu နဲ့အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ရင်ပေါင်တန်းနိုင်စွမ်း၊ သင့်မှာစားပွဲခုံအမျိုးမျိုးရှိပြီးတစ်ခုချင်းစီမှာပရောဂျက်အမျိုးမျိုးကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ သင်ရင်ခွင်ကိုတကယ်မျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိလုပ်နိုင်တယ်၊ သူကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ရုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်၊ ၎င်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အကောင်းဆုံးအရာများဖြင့်အရင်းအမြစ်များကို ဦး တည်ရာ၊ အကောင်းဆုံးမှာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းကူညီနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်၊ UBUNTU ကိုလုံးဝထောက်ခံထားတယ်။ သင်လိုအပ်တာတစ်ခုကသူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကောင်းကောင်းစုပ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဘလော့ဂ်တွေအများကြီးရှိတယ်။
အဲဒါကို Defragment လုပ်ပြီးအမှားအယွင်းတွေကိုစစ်ဆေးပါ။ (၁၅ ရက်တစ်ကြိမ်နေ့စဉ်လုပ်တာကနေ့တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ) ။ ကျွန်မရဲ့ Lap ကမကြာသေးခင်ကမှ ၂ လလောက်အသစ်ဖြစ်သွားတယ်။
ဟားခါးဟားဟားငါ ၃ နှစ်နီးပါးလောက်အတွက် windows3pc ကို format မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ငါအတွက်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တယ်။ ဗီဒီယိုဂိမ်း ၂၀၀ လောက်တပ်ဆင်ထားပြီးပရိုဂရမ်အတော်များများလည်းရှိတယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်မှာဗီဒီယိုဂိမ်း ၂၀၀ လောက်တပ်ဆင်ထားပြီးပရိုဂရမ်အတော်များများလည်းရှိတယ်။ jehova ရဲ့သက်သေကိုစိတ်ထားရှိသူတွေရှိတယ်။ လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ linux ဇာတ်လမ်းတွေကိုပြောင်းချင်ကြတာပါ။ နောက်လာမယ့်နောက်ပေးဆပ်ရန်နှင့် repositories command များစသည်တို့စသည်တို့ကို console search အတွက်လက်ခံဖို့ကပိုပြီးလွယ်ကူသည်။ Window လိုင်စင်ကို hack လုပ်ထားနိုင်ပြီးအခြားဆော့ဝဲများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုလည်း ... hhehehehe အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ရှိလိမ့်မည်
စီးပွားဖြစ်တစ်ခုဖွင့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောပြသနာကစတင်သောအခါစသည်မှာ Ubuntu ရှိမျက်နှာပြင်သည်ညာဘက်သို့ရွေ့သွားပြီးအလျားလိုက်အစင်းလေးသေးငယ်သွားသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အားရွေ့လျားစေသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် dash (သို့) မည်သည့်အရာကိုမဆိုကန ဦး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသို့ပြန်သွားခွင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်တော်ဟာလုံခြုံတဲ့ဂရပ်ဖစ်စနစ်နဲ့တိုက်ခဲ့ရတယ်၊ အဲဒါကကျွန်မကိုထပ်တူထပ်မျှပြproblemsနာတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်စတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲဒါကိုပြန်ပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအခုပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်။
အရာကတော့ Ubuntu ထဲကဂရပ်ဖစ်တွေကိုအခွင့်ကောင်းယူချင်တာနဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်အောင်သော့ကိုရှာချင်တယ်။ မော်ဒယ် AMD Radeon HD 7670M ပဲ၊ ငါ fglrx နဲ့စမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။ နှင့် fglrx-updates များနှင့်အတူတူပင်ပြproblemနာနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူ။ အဲဒါဟာစည်းလုံးမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်မလား။ Ubuntu စတူဒီယို (သို့) Xubuntu ကိုငါစမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဲဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကွန်ပျူတာ၏မော်ဒယ်မှာ Toshiba Satellite L850 (ဟုတ်ပါတယ်၊ UEFI နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ထိုအစိတ်အပိုင်းကိုကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်) ။
မင်္ဂလာပါ၊ Cinnamon PPA သည် 64-bit not မဟုတ်ပါ
မင်္ဂလာပါ ferr! ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ post ကိုထည့်ပါလိမ့်မယ်။
Ubuntu 14.04 ကို Windows 8 တွင်ကျွန်ုပ်၏ sony vaio စက်၌ထည့်ပါ။ Legacy boot သို့ပြောင်းခြင်းဖြင့် UEFI ကိုပိတ်ပါ။ Security Boot Probe ကိုကျွန်တော် disable မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် installation မှာ Ubuntu ကအခြား operating system ရှိသလားဆိုတာကိုသိလား။ ဒါကသွားလေ၏။ ထို့နောက် Ubuntu installation ကိုပြသနာမရှိဘဲဆက်လုပ်ပါ။
စက်ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လိုချင်သော operating system ကိုရွေးချယ်နိုင်သောမျက်နှာပြင်နှစ်ခုတွင် Ubuntu ကိုသာငါစတင်နိုင်သည်။
၎င်းကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး Windows 8 ကိုစတင်ချင်ပါသလဲ။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း Linux အသုံးပြုကြစို့
အလှူငွေအတွက် Grax များစွာသည်ပြည့်စုံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာနှင့်များစွာမသက်ဆိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုသင်ကူညီနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အရောင်များနှင့်အရောင်များကိုအရောင်များပြောင်းလိုသည် (menu bar မှာဝှက်ထားပါသည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောအချက်မှာစနစ်> အသွင်အပြင်၌ပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်ထိုရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မပေါ်ပေါက်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စနစ်တွင်အသွင်အပြင်မရှိပါ။ ၎င်းသည်ကိရိယာများကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ ပြင်ဆင်ခြင်းများကြောင့်လားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါ၊ သို့သော်ဗားရှင်း ၁၂.၀၄ တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ပြသနာမရှိခဲ့ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ system> အသေးစိတ်မှာတောင် Ubuntu 12.04 လို့ပြောသင့်တဲ့နေရာမှာတောင်မသိသေးပါဘူး .... Ubuntu 14.04 WTF ??? ဒါပေမယ့် console ထဲမှာတော့… 13.10 ကို install လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ငါ့ကိုလမ်းပြနိုင်, ငါအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိမ့်မယ် !! ကောင်းသောနေ့!
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက ၁၀၀ ပါ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော် Linux operating systems နဲ့စတင်ခဲ့တယ်။ အတွေ့အကြုံမကောင်းဘူး။
စလုပ်ကြစို့။ ကျွန်ုပ်တွင်ကွန်ပျူတာ ၃ လုံး၊ IBM Pentium 3၊ asus နှင့် amd3 များရှိသည်။ Pipermine, Fedora, Ubuntu 64 သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည် KUbuntu ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ မည်သူမျှမလုပ်ခဲ့ကြပါ၊ တစ်ခုမှာ Ubuntu ကို install လုပ်ပြီးတခြား operating system ရဲ့ data တွေကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဖယ်ရှားနိုင်အောင် format လုပ်ခဲ့ရတယ်။
ငါပြtheနာကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအလုပ်မလုပ်လို့၊ pc သည်အမှတ်ခြစ်နေသည်။ ဆိတ်ကွယ်ရာငါကထပြန် run ဖို့ reboot ရန်ရှိသည်။
အကူအညီဟာဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါ Ubuntu ဖိုရမ်ကိုစပိန်ဘာသာနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတယ်။ အတည်ပြုချက်မရသေးဘူး။
သူတို့ကပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ငါဘာကိုမှမမြင်ရဘူး၊ ဆန့်ကျင်။ အချို့သောအုပ်စုများအတွက်ပြုလုပ်ထားပုံရသည်၊ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများကြောင့်လက်တွေ့မကျသည့်ဖယ်ရှားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနားလည်သောတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာမရှိချေ။
မားကို့စ, ဒါပေါ့ပေါ့တန်တန်စကားမပြောပါနဲ့။ ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမှာကသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဗဟုသုတ၊ စိတ်ရှည်မှုနှင့်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲကြောင့်လူတိုင်းတွင် GNU / Linux နှင့်အတူတူအတွေ့အကြုံမရှိကြပါ။
မည်သည့် OS ကမှကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများကိုချိုးဖျက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြနာကထိုင်ခုံနဲ့ကီးဘုတ်ကြားမှာပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောဟာ့ဒ်ဝဲသုံးကွန်ပျူတာ ၃ ခုတွင်ဖြန့်ဖြူးမှု ၄ ခုသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ၎င်းတို့အားလုံးမှာဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူညီချက်တစ်ခုခုရှိပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်ဆုံးပေါ် AMD အပိုပစ္စည်းများအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ငါ ၁၀၀% နားလည်သော်လည်းသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်ထောက်ခံမှုအချို့ရှိရမည်။
သင်ဖော်ပြသောဖြန့်ဝေမှုများအားလုံးသည် open source သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး ၉၅% ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ရှာဖွေရန်မျှော်လင့်သည့်အရာသို့မဟုတ်သင် source code ရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူသင်ဘာလုပ်ရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ သငျသညျအဘယျ OS ကို uninstall option ကိုရှိကြောင်းလည်းငါ့ကိုပြောနိုင်သလား ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများအားဖြင့်သင်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ပြီးတော့သူတို့ကအခမဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး Windows နဲ့ OS X တို့ထက်ပိုပါတယ်
Unsettings install လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး
ပထမအဆင့်နှစ်ခုကကောင်းပါတယ်၊ တတိယကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါဘာလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် (၂၀၁၀-၂၀၁၁ တွင်) Ubuntu နှင့်တွေ့သောအခါ၎င်းကို Acer 2010 Laptop တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးနှေးကွေးခဲ့သည်။ ဆင်းရဲတဲ့လက်တော့ပ်မှာဗွီဒီယို 2011mb ရှိပြီး RAM 3680mb နဲ့ Intel Pentium M single-core ပရိုဆက်ဆာတွေပါရှိပါတယ်။ Dell Latitude D128 Laptop မှာ Linux Mint 512 (Mate) ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 16gb ram (၂.၈ gb အတိအကျ)၊ AMD turion ပရိုဆက်ဆာ (dual-core), 351mb ati graphics card ပါဝင်ပြီး၎င်းသည်လျောက်ပတ်စွာသော့ခတ်သော်လည်းကောင်းသည်။
ဤ Ubuntu သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မြန်ဆန်စွာသွားနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုကျပျက်စီးခြင်းရှိမရှိကိုသိလိုသည် (ATI ကဒ်များကိုအထောက်အပံ့မပေးနိုင်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုငါဖတ်ဖူးသည်) ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဖြေသည်၊ ကျွန်ုပ် install လုပ်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်လျောက်ပတ်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်ပြေးသည် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ချိတ်ဆွဲထားသည်)
Ubuntu ကို compaq presario v5000 ၌သာတပ်ဆင်ထားသည်။ အရာခပ်သိမ်းကောင်းနေပါသည်။ မကောင်းသောအရာက၎င်းသည်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များကိုမရှာဖွေနိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကဒ်အတွက်ရေငုပ်စက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမသိပါ။ bmc4311
မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြောပြပါမည်။ (ကျွန်ုပ်သည် Galician ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် Galician တွင် buntu ရှိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ပေးသောအမည်များသည်လုံးဝအတိအကျမဟုတ်ပါ)
ထိုအချိန်တွင် shutdown ခလုတ်တည်ရှိရာ menu ကိုသင်ပေးထားပြီး၎င်းကိုပေးပြီး "System Preferences" ကိုရွေးချယ်ပါ။
အတွင်းထဲရောက်ပြီဆိုရင် "software and updates" ကိုရွေးပြီးနောက်ဆုံး tab "proprietary driver" ကိုရွေးပြီး Broadcom အတွက် drivers တွေကို install လုပ်ချင်ရင်ပြောမယ်။
Asus X50R မှာတူညီတဲ့ပြproblemနာရှိခဲ့တယ် (Broadcom bcm4311 card) ကျွန်ုပ်အားစနစ်ကမ်းလှမ်းသောစီးပွားဖြစ် STA ယာဉ်မောင်းများသည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်သူသည်၎င်းတို့ကိုသူတို့တပ်ဆင်ရန် (သို့) ၎င်းတို့ကိုဖယ်ထုတ်ရန်မဟုတ်ပါ။
$ sudo apt-get ရှင်းလင်းမှု bcmwl-kernel-source broadcom-sta-common broadcom-sta-source
ထို့နောက် packages များ install လုပ်ပါ:
ပြန်လည်စတင်တဲ့အခါမှာ wifi အလုပ်လုပ်နေတယ်။
sudo add-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / kinnamon-stable
သင့်ရဲ့ input ကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
sudo add-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / kinnamon-nightly
sudo apt-get install သစ်ကြံပိုးခေါက်
မင်္ဂလာပါ၊ သင့်မှာမှားတဲ့ command တွေအားလုံးရှိတယ်။ apt-get မဟုတ်ဘူး။
ကောင်းပြီ၊ apt နှင့် apt-get နှစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ယခုနောက်ဆုံး Ubuntu ဗားရှင်းတွင်သင်သုံးနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ မင်းရဲ့ post ကိုကြိုက်တယ်
ငါ Linux ကို7နှစ်မသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒီနေ့ Ubuntu 14.04 နဲ့ငါပြန်နေပြီ။ အရာတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်
ငါဖတ်နေတုန်းမှာငါသတိရမိတာက "apt install" ကိုသာရေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ apt-get install သာရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ ထိုအခါငါကကြိုးစားခဲ့ကြောင့်အမှန်ပင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုကိုဘယ်အချိန်မှာအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သလဲ။ ၎င်းသည် apt-get သို့မဟုတ် aptitude နှင့်ကွဲပြားခြားနားပါသလား။
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်၏ ubuntu 14.4 ကိုစမ်းသပ်သည်။ အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ကောင်းတဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ post လိုဘာမှမရှိဘူး။
alvaro garcia isordia ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ဒီ Ubuntu 14.04 ကို Update သို့မဟုတ် Update လုပ်ရန်အတွက် Trusty Tahr operating system အတွက် sudo apt-get update နှင့် sudo apt-get upgrade တို့ကိုဤ command များလိုအပ်သည်။
alvaro garcia isordia သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ၊ ubuntu ရှိ .zip extension ကို .otx ကိုဘယ်လိုပြောင်းနိုင်လဲ။
ငါမကြာသေးမီက windows ကိုမသုံးတော့ဘဲ ubuntu သို့ပြောင်းလိုက်သည်။ ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည် Spanish အဘိဓာန်နှင့် autocorrector ကို libreoffice သို့ install လုပ်၍ မရပါ၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ubuntu ကို Unity နဲ့ညှိဖို့ Unsettings အစီအစဉ်ကိုဒီလိပ်စာမှာတွေ့နိုင်တယ်။
စာရေးသူအနေဖြင့်၎င်းကိုယခင် Ubuntu မူကွဲများအတွက်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည် Beta ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မည်သည့်တပ်ဆင်မှုမဆို၎င်းကိုတပ်ဆင်သောအသုံးပြုသူတစ် ဦး စီ၏အန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။
ငါ gdebi ဖြင့်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးမှီခိုမှုအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီး၎င်းကိုပြandနာမရှိဘဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြောင်းအလဲများကိုမပြုလုပ်ရသေးပါ။ ထို့ကြောင့်ဤရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်မပေးနိုင်ပါ
ကျွန်ုပ်မှာ Xubuntu 14.04 နဲ့ပြhaveနာရှိနေတယ်။ compiz အလုပ်မဖြစ်ဘူး
အရာရာတိုင်းကိုကျွန်ုပ်အမြဲလုပ်သကဲ့သို့ install လုပ်ပြီး configure လုပ်သည်။ X (သို့) system ကိုပြန်လည်စတင်သောအခါ compiz သည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် Compiz သည်မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်လိုက်ပြီးပြန်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်သတင်းစကားကိုရရှိသည်။
Xubuntu ထွက်လာပြီးအသုံးဝင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမတွေ့ရသေးပါ။ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သမျှအားလုံးသည် compiz များကိုအဟောင်းဗားရှင်းများတွင်ထည့်သွင်းရန်လမ်းညွှန်များဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြnothingနာနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
မည်သူမဆိုအလားတူပြproblemနာရှိခဲ့ကိစ္စတွင်ငါဒီမှာဒီ post ။ ဒါကတကယ်တော့မသေချာသော်လည်း compiz သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မော်နီတာကိုဖြတ်ပစ်ရန်တစ်ခုတည်းသောအလားအလာရှိသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကောင်းသော post!, သဟဇာတ ATI / AMD ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် linux မှာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုဆိုသောမည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသိပါသလား (သူတို့မှာအထောက်အပံ့ရှိပြီးသင့်တင့်သောအလုပ်ရှိသည်)
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ laptop မှာ ubuntud ကို install ချင်တယ်ဆိုရင်2gb ram 1 ghz ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့မှာ dual core ရှိတယ်။ ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။
Alberto Acevedo ဟုသူကပြောသည်
alberto Acevedo သို့ပြန်သွားပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ မှတ်ချက်များအများစုကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပါသည်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်ုပ်သည် Ubuntu ၏မှောင်မိုက်သောအနုပညာတွင်ဂုရုမဟုတ်သော်လည်းသင်၏ login panel မှ Gnome Flashback နှင့် Unity တို့အကြားရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အာရုံစိုက်မိသည်။ အောက်ပါလိုင်းတွေအကြောင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာ Gnome3ကိုငါ install လုပ်လိုက်ပြီ။ အခုပြproblemနာက Ubuntu Tweak ဟာအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေ checkBox လိုမျိုး element တွေအားလုံးကိုမပြဘဲ update manager ကနေ update လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မှာပါ။ မှားယွင်းသော packets များသို့မဟုတ်ပေါရာဏခေတ်ကုန်သွားသော ppa များရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း update ကိုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ရရှိပါက၎င်းကို ဆက်၍ ပေးပါက Ubuntu ၌ရှိသည့်ပရိုဂရမ်များစွာကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သနည်း။ ငါနေဆဲ Gnome3 နှင့်အတူစည်းလုံးညီညွတ်ရေးရှိနိုင်သလား? အဲဒီနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုငါရွေးရမလား။ …။ သင်ထည့်ဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်
Desiderio Goyen ဟုသူကပြောသည်
Desiderio Goyen အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ Ubuntu Gnome အတွက်လမ်းညွှန်လား။ တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ linux ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ joomla သင်တန်းကိုလုပ်ဖို့၊ ငါ ports တွေဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမှန်းတောင်မသိဘူး။ ငါ Trojan တွေကိုင်တွယ်လို့မရတော့ဘူး၊ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ်မသိရပါဘူး
ဒီဟာက Linux သို့မဟုတ် Windows မှာလား။
Ubuntu ကိုဝါးဖို့အတွက်ဒီလမ်းညွှန်ကအရမ်းကောင်းပါတယ်ဗားရှင်း 14.04 ကိုသွားမယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြန်ဆုံးအကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ပြproblemနာမှာပညတ်တော်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းရရှိသည်။ အဲဒါကိုသုံးပြီးအခြားဖြစ်စဉ်ကို?
ubuntu software center ကိုငါမသုံးနိုင်သေးဘူး
PD: ubunto မှာကျွန်တော့်ရဲ့ exp = 0
ဒါအမှန်ပဲ ... သင်ဟာ package တစ်ခုကို update သို့မဟုတ် install လုပ်နေတာဖြစ်နိုင်ပြီးအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သင် run လိုက်တာဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် dpkg သည်“ မူးဝြေခင်း” ဖြစ်လာသည်။ သင်လုပ်ရမှာကအောက်ပါ Command ဖြင့်ဖိုင် / var / lib / dpkg / lock ကိုဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။
Hugo Ramón Arzamendia Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ နောက်ဆုံးသတင်းများကို install လုပ်ပြီးသောအခါ Ubuntu သည်ကျွန်ုပ်ကိုမဖွင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားပွင့်နေသောဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အနက်ရောင်ဖြစ်နေသည်။
Hugo Ramón Arzamendia Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီ post မှာ third-party repositories တွေဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုရဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်အတွက်လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုအန္တရာယ်တွေကိုသတိပေးတာကိုငါမတွေ့ရဘူး။
ကျွန်ုပ်သည် IT ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သော်လည်း ppa တပ်ဆင်ရန်မသင့်တော်ကြောင်းအကြံပေးခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Ubuntu software center တွင်မရှိသောအရာများသည်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
စာရွက်ပေါ်တွင်အန္တရာယ်ရှိနေသည်။ သို့သော် PPA ကိုထိန်းသိမ်းသူများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော developer များဖြစ်လျှင်ပြnoနာမရှိပါ။ ထိုတူညီသောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက်မှာ PPAs ကိုအနည်းငယ်သာအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်ဉာဏ်ရည်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, PPA ကိုအသုံးပြုခြင်းမှဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ် malware ကူးစက်ခံထားရသူမည်သူမဆိုမသိရှိပါ။
အလွန်ဆို AR ဟုသူကပြောသည်
ငါက Ubuntu အတွက်လူသစ်တစ်ယောက်ပါ၊ ငါ kazam ကိုကြိုးစားနေပေမယ့်အခြား operating system များဖြစ်သော android သို့မဟုတ် windows ကဲ့သို့သောဗီဒီယိုများပြသရန်အခက်အခဲရှိသည်။ ကျွန်ုပ် mp4 တွင်မှတ်တမ်းတင်ပါကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Alonso AR အားစာပြန်ပါ
၀ င်းဒိုးပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အပြုအမူကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာပုံသေသတ်မှတ်ထားသော configuration များအရ ၀ င်းဒိုးပေါ်တွင်နှစ်ချက်နှိပ်ပါက၎င်းကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ငါလုပ်ချင်တာကိုနှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ Ubuntu ၏အခြားမူကွဲများ၌၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင်၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ ၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မျှရှာမတွေ့ပါ။
ဟိုဆေးပါပလော Ramos ဟုသူကပြောသည်
ဤအရာအားလုံးကိုရှင်းပြရန်အချိန်ယူရသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်ုပ်၏စက်ထဲသို့ Ubuntu ကိုတပ်ဆင်လိုသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်ခက်ခဲပါသည်၊ သင်ကကျွန်ုပ်အားအကြီးအကျယ်အကူအညီပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
José Pablo Ramos ကိုပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို့။ ငါ Linux လောကကိုစူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Ubuntu ကိုနှစ်သိမ့်စရာအကြောင်းမရှိလို့ငါသတိထားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့် Elementary အကြောင်းလေ့လာပြီးအခုထိတော့အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကနှေးနေသလိုခံစားရတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ PC အတွက်မူ Elementary 64BITS, 4GB RAM၊ Intel®Pentium®4CPU 3.00GHz ×2ကိုအသုံးပြုသည်။ VI896 Technologies, Inc. CN896 / VN4 / P900M9 [Chrome 01 HC] (rev 120) နှင့် hard disk 64GB၊ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်စေရန်တစ်ခုခုကိုငါပြောလိုသည်မှာ - / ပြီးတော့ 32 BITS ကိုသုံးရင် (သို့) ငါဖြတ်သွားတဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကအဆင်ပြေတယ်။ XNUMXBITS သို့? ငါမသင့်လျော်သောနေရာတွင်မှတ်ချက်ပေးရန်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမယ့် Elementary ဘလော့ဂါအနည်းငယ်သာရှိပြီး Elementary သည် Ubuntu ကိုအခြေခံသည်ကိုနားလည်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Linux လောကနှင့်အသစ်ဖြစ်နေပြီးမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုပါသည်။
ငါ Linux Mint ကိုသုံးပြီးသူ့ရဲ့ interface ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် Ubuntu ကို install လုပ်တဲ့အခါဖြန့်ဖြူးတာပိုကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဖြန့်ဖြူးတာကပိုကောင်းတယ်။ တလျှောက်။
မေးစရာမှာ - အကယ်၍ ငါ Cinnamon ကို Linux Mint ၏ interface ဖြစ်သော install လုပ်ထားလျှင် desktop နှင့် Native LM menu များတွင် icon များရှိနိုင်သလော။
အကယ်၍ သင်သည်ဤမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေးခွန်းနှင့်အဖြေပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တင်ပါကပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် FromLinux ကိုမေးပါ သင့်ရဲ့ပြproblemနာကိုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကကူညီနိုင်အောင်။
ကော့ဒ်အမျိုးသမီး (ကျွန်ုပ်သည် spam မဟုတ်ပါ) ဟုသူကပြောသည်
SPAM မဟုတ်ပါ။ မင်္ဂလာပါ။ ထုတ်ဝေမှုအတွက်ခွင့်ပြုပါ။ ဤထင်မြင်ချက်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောသူများအားခွင့်လွှတ်ပါ။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တွင်မွမ်းမံမှုပြproblemsနာများရှိသည်၊ အကြောင်းမှာလက်မှတ်ထိုးထားသည့်နေရာများသည်မွမ်းမံထားခြင်းမရှိကြောင်းနှင့်၎င်းတို့အားငါဖယ်ထုတ်လိုက်ရသည့်စာမျက်နှာကမဖော်ပြပါ။ ရရှိနိုင်သော့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အမှားမှာ GPG နှင့် multimedia deb စာမျက်နှာတို့ဖြစ်သည်
အချို့သောအညွှန်းဖိုင်များသည်ကူးယူရန်မအောင်မြင်ပါ။ ၎င်းတို့သည်လျစ်လျူရှုခံထားရသည် (သို့) အချို့သောဟောင်းများကိုအစားထိုးအသုံးပြုကြသည်။ »
ငါဒီဟာကိုစာရင်းထဲမှာပြင်ပေးရမယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ငါစာမျက်နှာများစွာပေါ်တွင်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်အမှန်တရားငါအတော်လေးနားမလည်ကြဘူး, ငါအတွေ့အကြုံမကောင်းခဲ့ကြပြီးငါပြန်လည် install ခဲ့ကြသောကြောင့်။ ဟုတ်တယ်။ ဒါကမင်းဆီကသင်ယူခဲ့တာပဲ။ သို့သော်အခြားပြproblemနာတစ်ခုမှာကွန်ပျူတာသည် Ubuntu နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမသိသောဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး နှင့်ဖြစ်ပြီးသူ၏မိဘများမှာကွန်ပျူတာဆိုင်းငံ့ထားလျှင်၎င်းသည်ကြီးလေးသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ။ ကျွန်တော်ဟာနည်းပညာရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့်ဒီကွန်ပျူတာကိုသုံးပါတယ်။ ဒီအမြင်အာရုံကိုပျက်ပြားစေတဲ့အတွက်ငါထပ်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။
Bacalao Woman ကိုစာပြန်ပါ (ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ် spam မဟုတ်ပါ)
Linux သည်ဆာဗာများပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းသာမာန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အတွက်မူ၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးသင်ခန်းစာသည်ငြီးငွေ့စရာဖြစ်နေသည်။
deb-multimedia repos ကိုသင်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရာအားလုံးသည်တရားဝင် repos တွင်ပါ ၀ င်ပြီးဖြစ်သည်။ အလွန်တိကျသောကိစ္စရပ်များမှ လွဲ၍ (အထူးသဖြင့်သင့် distro တွင်မပါ ၀ င်သောကျွမ်းကျင်သောအသံကိရိယာများ) သင်ထို repository ကိုမလိုအပ်ပါ။
တရားဝင် deb- မာလ်တီမီဒီယာစာမျက်နှာတွင်လည်းသူတို့ကသင့်အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြပြီး repository keys နှင့်သက်ဆိုင်သော package ကို install လုပ်သည်။
Fred သည် cespedes ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော် Ubuntu 14.04 lts ကိုပဲ install လုပ်ပြီးပြီ။ 2g Ram သာရှိတဲ့ Dell pc မှာကောင်းတယ်။
Fred Cespedes ကိုပြန်ပြောပါ
Manuel Ch ။ ဟုသူကပြောသည်
Manuel Ch အားပြန်ပြောပါ။
မင်္ဂလာပါ။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Ubuntu ကို install ပြီးအောင်လုပ်ရန်အချက်အလက်များသည်အလွန်မှတ်သားစရာပါ။ 🙂
မင်းရဲ့အရေးအသားကြောင့်မင်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုနားလည်ပေမဲ့၊ မင်းရဲ့ဝါကျတွေကိုအပြည့်အဝနားလည်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ဒါ့အပြင်သူတို့ကိုအပြည့်အဝနဲ့ထိရောက်စွာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါထင်တာကတကယ်အရေးကြီးတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိထားခြင်းဖြစ်တယ်။
ငါမကြာသေးမီက Xubuntu 14.04 ကို install လုပ်လိုက်တယ်။ FFox ကိုဘယ်လို update ရမလဲ။ windows version အဖြစ်ပရိုဂရမ်ကိုယ်တိုင်မှမွမ်းမံလို့မရဘူး (၎င်းကို Help menu မှမွမ်းမံ)
ငါ Ubuntu ဆော့ဝဲစင်တာကိုကြည့်ပြီးပါပြီ (ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သို့သော်၎င်းကိုသူတပ်ဆင်ထားသည်ဟုသာပြောခဲ့သည် (ဗားရှင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်) ၎င်းကိုထိုနေရာမှမွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။
MATE ကရှုပ်ထွေးတယ်။ ငါ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်များကိုပြောင်းလဲပြီးမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ငါရိုက်ထည့်ချင်တဲ့အခါ, ငါစကားဝှက်ကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး။ ငါဝင်ရန်နည်းလမ်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါ့ရဲ့ desktop ကိုပြန်မရနိုင်ပါ။ ငါ Ubuntu 14.04 နဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေအားလုံးကိုပြန် install လုပ်ရမယ်။
MATTE SEWED သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်သည်ဤ GNU / Linux နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောအကြောင်းအရာများအတွက်အသစ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်မေးခွန်းကအင်တာနက်မရှိသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်မှာ X သို့မဟုတ် Y application မ်ားကို download လုပ်နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။
ဟယ်လို! ပထမ ဦး စွာအဖြေအတွက်နှောင့်နှေးမှုအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Ask From Linux service ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးသည်။http://ask.desdelinux.netဤတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုမျိုးကိုလုပ်ဆောင်ရန်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံး၏အကူအညီကိုရနိုင်သည်။
အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးထိရောက်သော linux ရှိလူသစ်များအတွက်ရိုးရှင်းသောလက်တွေ့ကျသောလက်စွဲစာအုပ်ဤသည်အတွက်အလွန်ကောင်းသောဘလော့ဂ်သည်၎င်းတို့အားကူညီရန်အသုံးပြုသည်၊ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားမိတ်ဆွေ venezuela, caracas မှသင့်အားများစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဆောင်းပါးကောင်းတယ်၊ သတင်းအချက်အလက်ကငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 🙂
Compa သည် ubuntu 16.04.1 32 bit bit ကို install လုပ်သည်။ သို့သော် browser အတွင်း၌ဗီဒီယိုများမဖွင့်နိုင်ပါ၊ ပြင်ပသိုမဟုတ် internal memory ရှိဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ် Ubuntu system တွင်ဗဟုသုတသိပ်မရှိကြပါ။ အင်တာနက်စသည်
Arch Linux တွင် Openbox ကို Install လုပ်ပါ
Google Reader ကွယ်လွန်ပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာဘယ်အွန်လိုင်း RSS စာဖတ်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ခွာခဲ့သလဲ။